UJohn Wayne. Iincwadi ezi-6 zokufunda malunga nelivo laseHollywood | Uncwadi lwangoku
UJohn Wayne. Iincwadi ezi-6 zokufunda malunga nelivo laseHollywood
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | I-Biography, Iincwadi, Inoveli
Bambhaptiza ngegama lika UMarion Michael Morrison, ihlabathi lalimazi njenge UJohn Wayne, inja yakho Duke (UDuke) wamnika isiteketiso, kwaye wamnika ngonaphakade kwisikrini esikhulu. Udlule usuku olufana namhlanje ngo-1979. Wayengumntu obalaseleyo kumdlalo bhanyabhanya ogqithisileyo kwaye uhlala engaguquguquki njenge inkcubeko ethandwayo ayiveli nje eUnited States.
Ezi zi Iincwadi ezi-6 zokukhumbula. Zininzi Imbali yamabali, kodwa ikwakhona inoveli yeyiphi eyona bhanyabhanya ibalaseleyo kwimbali ye-cinema isekwe, isayinwe yenye enkulu njengoJohn Ford.
1 UJohn wayne kunye nam
2 Iibhayografi kunye neencwadi
2.1 Isiporho sikaJohn Wayne-Jaime Molina
2.2 UJohn Wayne, iqhawe laseMelika-uFernando Alonso Barahona
2.3 UThixo uhamba ngeHollywood - uMary Claire Kendall
2.4 UJohn Wayne, ongu-biography - uJuan Tejero
2.5 UJohn Wayne, uMthunzi weGiant-Carolyn McGivern
2.6 Indoda Ethula-uMaurice Walsh
UJohn wayne kunye nam
Kum ujohn wayne wandikhumbuza utat'omkhulu UPeter. Abazange bafanane, kodwa bazalwa ngonyaka omnye, 1907. Kwaye uninzi lweemovie endizibonileyo kuye bezikwilizwe, kwindlu katat'omkhulu, ngeMigqibelo emva kwemini okanye e ICinema yangoMgqibelo ngokuhlwa. Zonke ii Oeste.
Ke ukuba uzelwe ungumntu obonisa imuvi, mhlawumbi ukhe wacinga njalo uninzi lweemovie ezintle ozibonileyo zinomfanekiso ongenakuthelekiswa nanto walo mdlali 1,93 ukuphakama, uphawu lokuhamba kunye nobukho obupheleleyo.
ndibene 72 iminyaka ukusweleka kwakhe nomhlaza Ngubani ekuthiwa uyagula (njengabanye abaninzi abebesebenza kuyo) esenza Umoyisi waseMongolia, Ukufota kwakhe kwakukwisithuba esasisetyenziselwa ngaphambili iimvavanyo zenyukliya. Kodwa i-cinema imgcina ephila ngonaphakade kubalinganiswa abangalilibalekiyo U-Ethan Edwards, uNathan Brittles, uJohn Chisum, uTaw Jackson, uFrank "Spig" Wead, uRooster Cogburn okanye uSean Thornton.
Iibhayografi kunye neencwadi
UWayne wayengumlingiswa kuye, ke abathandi bebhayiloji banemathiriyeli eyaneleyo yokufumana umbono wobomi bakhe, umsebenzi kunye nemimangaliso. Ezi zezinye zezinto ezazi nkcukacha zincinci zeDuke.
Umoya kaJohn Wayne -UJaime Molina
Ngaphezulu kwenoveli, a irhafu kwimovie, ngakumbi kwi-noir yefilimu kunye nomlingiswa odumileyo kaJohn Wayne. Ibiyi I-XV Castillo-Puche Ibhaso elifutshane leNoveli.
UJohn Wayne, iqhawe laseMelika -UFernando Alonso Barahona
Ngaba ifayile ye- okwesibini kwiibhayografi ezibhalwe eSpain malunga nomdlali weqonga kwaye yapapashwa ngo-2000 ngumbhali omnye. Eyokuqala yayiye ngo-1995 kwaye yabizwa ngokuba: UJohn Wayne. Iimuvi zakhe.
UThixo udlula eHollywood -UMary Claire Kendall
UKendall uthathe imifanekiso elishumi elinambini Ezinye zeenkwenkwezi ezinkulu kwimbali yefilimu malunga nazo inkolo engakumbi kwindalo iphela yoothixo bobuhedeni njengeHollywood. UJohn Wayne's wayemalunga naye uguquko kunye nobhaptizo kwinkolo yamaKatolika kungekudala ngaphambi kokufa.
UJohn Wayne, i-biography -UJuan Tejero
UTejero wahlula ubomi bentsomi eyayinguWayne kwaye wayichaza ubuntu obunzima, ephawulwe ngu ubu ethe-ethe nokungazithembi kodwa kuyengamandla, isidima kunye nesibindi.
UJohn Wayne, isithunzi sesigebenga -Carolyn McGivern
Le ncwadi isekwe kwi imibhalo yodliwanondlebe enikezwe nguWayne xa wayetyelele e-UK. Ikwabandakanya ingqokelela ebanzi ye izinto eyeyendawo yokugcina yogcino IZiko leMiboniso bhanyabhanya laseBritane, kwifayile URonald L. Davis eDallas kunye udliwanondlebe lomntu Umbhali lowo wayenabahlobo kunye nabasebenzi bakaJohn Wayne.
Indoda Ethula -UMaurice Walsh
Yayiyiyo umthengisi ogqibelele ngomhla wayo xa yayipapashwa ngo 1933 eUnited States, kodwa apha yayingashicilelwanga. Uzuko olungunaphakade walunikwa yi-cinema xa UJohn ford wamguqula waba Enye yeemovie ezilungileyo kakhulu.
Ke kufanelekile ukuba ufumane okanye ufunde ibali elingalibalekiyo USean Thornton, ukuba umlo wamanqindi waseMntla Melika obuyela kwilizwe lakowabo eIreland eyokufuna uxolo emva kokubulala engaqondakaliyo eringini engaqondanga. Kwaye into ayifumanayo luthando lwe UMary Kate Danaher, Umfazi onomdla wesimilo esomeleleyo nesithandayo. Ubuso babo buya kuhlala bunjalo UJohn Wayne noMaureen O'Hara.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » I-Biography » UJohn Wayne. Iincwadi ezi-6 zokufunda malunga nelivo laseHollywood
Uyibhala njani inoveli: ukhetho lombalisi
UGarcía Márquez ngamaxesha eMidlalo yeTrone